ဘင်္ဂါလီ ကြေးမုံဂျီးနှင့် Patriot ကြောင်ကြီး အပိုင်း၂ ဇာတ်သိမ်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ဘင်္ဂါလီ ကြေးမုံဂျီးနှင့် Patriot ကြောင်ကြီး အပိုင်း၂ ဇာတ်သိမ်း
ဘင်္ဂါလီ ကြေးမုံဂျီးနှင့် Patriot ကြောင်ကြီး အပိုင်း၂ ဇာတ်သိမ်း
Posted by ဦးေၾကာင္ၾကီး on May 17, 2013 in Aha! Jokes, Satire, Celebrity | 15 comments
အပိုင်း(၁)ကို ဤနေရာတွင် ဖတ်ပါ။
ကြေးမုံဂျီး ထွက်ပြေးလွတ်မြောက် သွားသောနေရာမှာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်မှုခုံရုံး အခြေစိုက်ရာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျီနီဗာမြို့ဖြစ်၏။ အစ္စလာမ့်ရန်သူ ၉၆၉ ဦးကြောင်ကြီးအား လူသားမျိုးနွယ်တုံး သတ်ဖြတ်မှုဖြင့် မတရားစွဲရန် ကြေးမုံဂျီးအား တရားလို လုပ်ခိုင်းမည့် မာမွတ်ရှာပွတ် ဦးခိုမ်၏ ယုတ်မာပက်စက်သော အကြံအစည်ဖြစ်သည်။ သူ့အား လေဆိပ်တွင် လာကြိုသူမှာ ယိုဟမ်ဂျာလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် တာလီဘန် ဧဝဒီဂျီး (ခ) အဗ္ဗဒူလာမုတ်ဆိတ် ဖြစ်သည်။ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ယိုဟမ်ဂျာဆိုသော်လည်း မြန်မာစကား မပြောတတ်သဖြင့် ခြေဟန်လက်ဟန်သုံး စကားပြောရသည်။ စာဖတ်သူမြင်အောင် ကောက်နှုတ်ပြသော် ကြောင်ကြီး အစ်အစ်.. ထိုသို့ မီးကျိုးမောင်းပျက် ပြောဆိုလျက် လည်ပင်းအား ဓါးလှီးဟန် လုပ်ပြသည်ကို ကြေးမုံဂျီးမှ လျက်ဆား ပဂိုးဆား ပင်လယ်ဆား အိုင်အိုဒင်းဆားဟု သိုးဆောင်းစဂါးဖြင့် သဘောတူသည်။ သူဒေါ်ခြင်းခြင်း သတင်း လွေ့လွေ့ ပေါင်းဖက်မိခြင်း ဖြစ်ပေသည်တဂါး…။
အမှုရင်ဆိုင်ရန် တပ်ချုပ်ကြောင်ကြီးမှာ လေယဉ်ဂျီးစီး၍ စစ်ဥပဒေချုပ် ဝတ်မှုံရွှေရည်၊ စစ်ဖက်လက်ထောက် ရတနာမိုင်တို့အား ခေါ်ဆောင်ကာ သရီးအင်ဝမ်းအခြစ် ဟိုတယ်၌ တခန်းထဲ အတူတည်းရင်း နေ့ညမပြတ် တလှည့်စီ နဖူးတိုက်ဒူးတိုက် တိုင်ပင်နှီးနှော နေလေသည်။ နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာ မပြုန်းတီးစေရန် လူသုံးယောက်ထဲ ဖြစ်သလို နည်းနည်းနှင့် ကျဲကျဲဝိုင်းခြင်းဖြစ်၍ များစွာအတုယူ ထိုက်ပေသည်။ ခွီး ဂရား ရှလွတ် ပလပ် ပလပ် ဂွီး မီညောင်း.. ။ ကစ်.. တော်လောက်ပီ ငါ့တလှည့်ပေးအုံး..၊ မိုင်လေး.. ကြာလိုက်တာ မပြီးနိုင်မစီးနိုင် တကထဲမှပဲ ဆိုသောအသံများမှာ ၂၄နာရီမပြတ် အခန်းပြင်မှ ကြားနေရပေသည်တမုံ့။
ဤသို့နှင့် လူ့အခွင့်အရေးရုံးဒေါ် တရားခွင် စတင်ခဲ့ရာ ဆွစ်ရုံးသုံးဘာသာစကားမှာ ဂျာမန်၊ ပြင်သစ် ဖြစ်သဖြင့် ကြေးမုံဂျီး ပြင်သစ်စကား တတ်သည်ဆို၍ ပြင်သစ်လို ကြားနာကြမည်။ သို့သော် ကြေးမုံဂျီးမှာ ဆီညော်.. ဝီဝီမှ မတက်ပေ။ ကြောင်ကြီးကမူ ပြင်သစ်လေသံအစစ် စမတ်ကျကျ မာဆီဗျန်း၊ အာဗျန်းတိုး၊ ထရဲဇောလီးကွန်ဇာ့ စသဖြင့် သွက်လက်ချက်ချာ ယဉ်ကျေးပျူငှာစွာ ပြောဆိုလေရာ ကြောင်နှင့်ကြေးမုံ နံ့သာဆီနှင့်အီး မိုးနှင့်မြေ ဘဝဂ်နှင့်အဝီစိပမာ အဆင့်ကွာ လွန်းလှပေသည်။ ဤအတိုင်းသွားလျင် တဖက်သတ် အနိုင်ကျင့်ရာရောက်မည် စိုးရိမ်ပြီး ရုံးတော်မှ အမှုအား မြန်မာစကားပြော တရားသူဂျီးနှင့် လူစားထိုးလဲလှယ် ပေးလိုက်ရသည်။ ဒါတောင် ကြေးမုံဂျီးက အရိပ်သုံးပါး နားမလည်… ပဲရစ် အီဖဲလ် ပါဂျို ဇီဒိန်း ဖရွန်ဆာမီထရွန်း ချားလ်ဒီဂေါလ် သိထားသမျှ ပြင်သစ် စာလုံးများ ရွတ်နေသေးသည်။ ကြုံဖူးပေါင် ဂုံဒူးဆောင် မြန်မာ့ဘုံချောင် ကြေးမုံဂျီးပေတီး..
မြန်မာစကားတတ်ကျွမ်းသည့် တရားသူဂျီးမအလှည့် ရောက်ရှိခဲ့ဂျေပီ။ အဟမ်း.. အမှုစတင် ကြားနာမယ်..ဒုံး။ အချက်ပေး တူထုသံနှင့်အတူ ကြေးမုံဂျီး ကပျာကယာ ထရပ်ရင်း မတရားသူဂျီးရှင့်.. အွမ်…. တရားသူဂျီးမ မျက်နှာရှုံ့မဲ့သွားသည်။ တရုတ်သဗုံ ကြေးမုံဂျီးကား ဝင်ဝင်ခြင်း ဆောက်နှင့်ထွင်းချေပြီ.. မှားလို့.. ဖတ် ဖတ်.. တရားသူဂျီးမရှင့်.. တာမီးဃဒေါ့ ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့မှ ထွက်ပြေးလာတဲ့ ယိုဟမ်ဂျာ ဖြစ်ပါတယ်ချင့်.. တာမီးမသိလို့ ချိန်ကိုက်ဗုံး ခေါင်းအုံးအောက် သိမ်းထားမိတာကို ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်း လက်ဝယ်ရှိမှုနဲ့ မတရား အမှုဆင် ခံရပါတယ်။ ဟောဟိုက ကြောင်ဇုတ် လုပ်တာပါချင့်။
အာမနာပ စွဲဆိုချက်အပြီးတွင် အနောက်တိုင်းဝတ်စုံ သေသပ်ကျနစွာ ဝတ်ဆင်ထားသော ကကြောင်ကြီးမှ ယုံကြည်လေးစား အားကိုးထိုက်ပြီး ကြည်ညိုဖွယ်အဆင်း ဥပတိရုပ် အိန္ဒြေသမ္ပတ္တိ ပြည့်စုံကာ အသံဩဇာ ကောင်းလှသော ညဏ်အမျှော်အမြင် ကြီးလှသည့် တရားသူကြီး မမခင်ဗျား။ ဆွစ်ဇာလန်မဂျီး ခေါင်းတငြိမ့်ငြိမ့် ဖြစ်သွားသည်မှာ အထူးပြောဖွယ်ရာ မလိုချေ။ ဘင်္ဂါလီအတု မဟုတ်တရုတ် ကြေးမုံဂျီးရဲ့ ပလီစိခြောက်ချက် လံကြုတ်ဇာတ်ကို အထောက်အထားများနဲ့ တုံ့ပြန်ရှင်းလင်း သွားပါ့မယ်..။ လူသက်သေများ ခေါ်ခွင့်ပြုပါ တရားသူဂျီး စက်ဆီမမခင်ဗျား..။
တရုတ်နဂါးနဲ့ မြန်မာကြောင် အဟုတ်မနားစို့ တနှာထောင်….
လူသက်သေ (၁) ဖားပြုတ် မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု… နည်းနည်း မေးပါရစေ..။ တလောကလုံး သူ့လုပ်စာ ထိုင်စားနေသလို ပုပ်သိုးသိုးမျက်နှာ ရှစ်ခေါက်ချိုးနဲ့ ထိုင်နေတဲ့ ဟောဟိုရှေ့က ကြေးမုံဂျီးဆိုသူကို သိပါလား။ အင်း..အဲ မြင်ဖူးသလိုလိုပဲ..။ ဘယ်မှာတွေ့ဖူးပါသလဲ… ဘုံဆိုင်မှာပါ။ အဲဒီမှာ ဘာလုပ်ကြတာပါလဲ.. အပန်းပြေ ယမကာ မှီဝဲကြတာပါ။ လိုင်စင်ရ အရက်ဆိုင် ဟုတ်ပါသလား။ မဟုတ်ပါ.. ဖောရှော ချက်အရက်ရောင်းတဲ့ ခွက်ပုန်းဆိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ အမြည်း ဘာတွေရပါသလဲ… ပဲကြီးလှော်၊ လျက်ဆားနဲ့ ရံဖန်ရံခါ ဝက်သားတုတ်ထိုး ရပါတယ်။ ကြေးမုံဂျီး အဲဒါတွေ သောက်စားတာ မူးယစ်တာ တွေ့ဖူးပါသလား။ ဟုတ်ကဲ့ တွေ့ဖူးပါတယ်။ လက်ငင်းငွေချေ စားသလား.. ဟုတ်ပါဘူး အကြွေးနဲ့ပါ။ ဒါဆို သေချာမေးမယ်.. ရိုးသားစွာ မကွယ်မဝှက်ဖြေပါ။ မွတ်ဆလင်ဆိုရင် အရက်သောက် ဝက်သားစားလို့လား မွတ်စလင်အများစု ဝက်သားမစားပါ၊ အရက်တော့ ဆေးဖြစ်ဝါးဖြစ် ပုလင်းလိုက် ရေမရော နိချသူများစွာ ရှိပါတယ်..။ လိုချင်သော အဖြေမဟုတ်သဖြင့် ကပု မြင်အောင် ဘောင်းဘီအိတ်ထဲ ထည့်ထားသော ဗော့ဒဂါရုရှ အရက်ပုလင်းပေါ် ခါးထောက်ရင်း ထပ်မေးမယ် အားမနာတမ်းဖြေပါ။ အရက်သောက် ဝက်သားစားသူ မူဆလင် ဖြစ်ပါ့မလား။ ချက်ဆိုနားခွက် မီးတောက်၊ သနား၍ လက်ပေးကိုင်လျင် အဝှာကြံပါသော ကပု.. တံတွေးမျိုချရင်း လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ပါခင်ဗျား။ ဒါဆို ကြေးမုံဂျီး မွတ်ဆလင်ဆို ဘာပြောချင်လဲ။ အင်ဂျီးဖြစ်ကြောင်း ကျနော့်ဦးခေါင်း အပေါင်ထား ထွက်ဆိုဝံ့ပါတယ်။ ကပု သူ့ဇက်ကြီး ရှေ့ထိုး၍ ဖြေကြားလိုက်သည်မှာ တရားခွင်ရှိသူများအားလုံး ခေါင်းတငြိမ့်ငြိမ့် ဖြစ်ကုန်ကြသည်။ အမှန်တော့ ကပုမှ ခေါင်းရှေ့တိုး၍ ဗော့ဒဂါအရက်ပုလင်း အနံ့ခံကြည့်ခြင်း ဖြစ်သည်။
လူသက်သေ (၂) ခရစ်စတယ်လှိုင်း.. သာမီးကို ဦးကြောင်တခုမေးမယ်.. ကြေးမုံဂျီးကို ဘယ်မှာတွေ့ဖူးလဲ..။ တင်းနစ်ကွင်းမှာပါ… သူရိုက်တတ်တယ်ပေါ့.. ဟုတ်ကဲ့.. တင်းနစ်ရိုက်ရင် သူဘယ်လို ဝတ်စားသလဲ… သရီး ကွာတားဘောင်းဘီတို ဒါမှမဟုတ် စကပ်အတို၊ စွပ်ကျယ်လက်ပြတ်နဲ့ပါ။ မူဆလင်မတွေ အပြင်ထွက်တဲ့အခါ ခေါင်းကနေ ခြေဖျားဆုံး အဝတ်ဖုံးရတာ သိပါသလား။ သိပါတယ်.. ကြေးမုံဂျီး အဲလိုဝတ်တာ မြင်ဖူးပါသလား.. ဟင့်အင်း တခါမှမမြင်ဘူးပါ။ ထိုအချိန်တွင် ကြေးမုံဂျီးမှ ကြားဖြတ်၍ နင်နဲ့ငါ တခါက အောင်ဆန်းကွင်းနားက တခြမ်းပဲ့ဗလီ အတူသွားတယ်လေ…။ အဲဒါဟုတ်သလား.. ဟုတ်ပါတယ်၊ ဘာသွားလုပ်တာလဲ.. အဲ.. ဟိုဒင်း.. သူနဲ့ကျမ အစ်နေ့မှာဝေတဲ့ အမဲသား သွားတောင်းကြတာပါ။ အဲဒီကအပြန် ရန်ကင်းကြေးအိုးမှာ ဝက်သားနဲ့ ကြေးအိုုး စားကြပါသေးတယ်။ ဒါဆို သူမူဆလင် မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့.. သာမီး မထင်ပါဘူးရှင့်။ ကဲ..နောက်ဆုံး အနေနဲ့ တာမီးလေး တင်းနစ်ရိုက်ပုံ သရုပ်ပြပါအုံး.. တင်းနစ်စကပ်တို ဝတ်ဆင်ထားသော ခရစ်စတယ်လှိုင်း စားပွဲခုံပေါ်တက်၍ အလှရိုက်ပြသည်တွင် နှလုံးရောဂါ အခံရှိသော အမှုကြားနာသည့် ပရိတ်သတ်ဆယ်ဦးခန့် ဆေးရုံရောက်သွားသည် အထိပင်..။
ပစ္စည်းသက်သေများ – ကြေးမုံဂျီး၏ ဝက်သားတုတ်ထိုး ဝက်ဆီဖတ် ချက်အရက် သောက်စားနေသောဓာတ်ပုံ၊ နေ့ခင်းကြောင်တောင် လမ်းလယ်ခေါင် မူးယစ်ရမ်းကား၍ ရဲဖမ်းသောမှတ်တမ်း၊ လမ်းထဲရှိ နှပ်ချီးတွဲလောင်း ခလေးတသိုက်အား ဗိုလ်လုပ်ပြီး တရုတ်နှစ်ကူး တုံချမ်ချမ် နဂါးအက ဂွင်ဖန်နေပုံ၊ နဂါးအက အလှူငွေများအား တဦးတည်း မောင်ပိုင်စီး၍ ရက်ကွက်ရုံး အတိုင်ခံရသောစာ.. စသဖြင့် အေဖိုးစက္ကူပုံး ဆယ်ပုံးစာမျှရှိလေသည်။ ရာဇဝတ်ဘေး ပြေးမလွတ်.. ကိုယ်ရှုးကိုယ်ပတ် ဂွကျလေပြီ။ အမှန်တရား ဟူသည်ကား ဖုံးကွယ် မရစကောင်း.. လူလိမ်လူညာ မလည်ရှုပ် အမျိုးသားရေး သစ္စာဖောက် တရုတ်ကူမြူနစ်ပါတီကေဒါ ဝသဗုံတပ်မှူးဟောင်း ကြေးမုံဂျီးမျက်နှာ နှမ်းစေ့လောက်သာ ကျန်တော့သည်။ ကြောင်ကြီးအား ခြေစုံဖက် တောင်းပန်ရလေပြီ။ ကိုကို ကြောင်ကြီးချင့် သာမီးကို တနားပါ.. အမိုက်အမဲလေးမို့ ဗွေမယူပါနဲ့… ရတနာမိုင်နှင့် ဝတ်မှုံရွှေရည်တို့ကဒေါ့ တင်းမာသော မျက်နှာထားဖြင့် ခလုပ်ထိမှ ကြောင်ကြီးတ.. ဘယ်သူမပြု မိမိမှု.. နင့်ထိုက်နင့်ကံ နည်းတောင် နဲသေးတယ် ပြောနေသယောင်…။
ကြောင်ကြီးကား အသဲနှလုံးမဲ့ ရက်စက်တတ်သူ ငါဘို့သမား တရုတ်ကူမြူနစ် မဟုတ်ချေ..။ လူဂျီးလူဂေါင်း ပညာတတ် အကြင်နာ ကရုဏာနှင့် ပြည့်စုံသူ တရားမျှတသူဂျီး ဖြစ်သည်။ မငိုပါနဲ့ကွယ် ကြေမုံဂျီး မသိလို့ မိုက်မှားလို့ တွေဝေလို့ အသိညဏ်နည်းလို့ အတ္တကြီုးလို့ မနာလိုလို့ စိတ်ကောင်းမရှိလို့ တရုတ်ကူမြူနစ် ပါတီခိုင်းလို့ ပွဲခမြက်မြက်လေးရလို့ ဘယ်သူသေသေ ကြေးမုံမာစိတ်နဲ့ ကျူးလွန်ခဲ့တာ စိတ်ထဲမထားပါဘူး။ ခွင့်လွှတ်ဖို့ကိုတော့ ဂဇက်နိုင်ငံတော်သားတွေ မဲပေးဆုံးဖြတ်ကြပါစေ။ ဦးကြောင်မှာ အခြစ် အမုန်း မရှိတော့… တဏှာကိုပယ် ရာဂကို လွယ်ထားပြီး ပါပြီကွယ်.. ငှဲ ငှဲ ငှဲ..။
တခုတော့ရှိဒယ် နဲ့လာတိုးနေပါပေါ့လား …
ပွင့် ကိုကျောပိုးပြီး ဗထူးကွင်း ၌ ၁ဝ ပတ် ပတ်ပြေးစေ
ဦးကြောင်၏ ပစ္စည်းသက်သေ အေဖိုးဆယ်ပုံးစာအား
ရွာထဲတွင် ဒါ့ပုန်ဖြင့် တင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးသည့်အတွက်
(ကြေးမုံဂျီးက ဦးကြောင်ဒါ့ပုန်တွေ တင်ပြထားတာစုံစုံလင်လင်ပဲ)
ယုံကြည်လေးစား အားကိုးထိုက်ပြီး ကြည်ညိုဖွယ်အဆင်း ဥပတိရုပ် အိန္ဒြေသမ္ပတ္တိ ပြည့်စုံကာ အသံဩဇာ ကောင်းလှသော ညဏ်အမျှော်အမြင် ကြီးလှသည့် တရားသူကြီး ဆိုတာ ဘယ်သူ့ကို ပြောမှန်းမသိပေမယ့် ….
ကြောင်ကြီးပြောတာ အမှန်တွေချည်းပဲဖြစ်ရမယ်။ :harr:
စပါယ်ရှယ် ဝမ်းပဲဗျို ့
ကြေးမုံဂျီး ရဲ ့ကွန်မင့် ၊ ပို ့စ် ကို
ဥူးကျောင်ဂျီး ဘယ်လောက် တဘောထားကြီးကြီး..
အုပဓေ က အုပဓေပါဘဲ… ပစ်ဒန် ချမှတ်သင့်ပါတယ်ခင်ဗျ..
အဲအဲ ဥူးကျောင် ကြေးမုံဂျီးကို သန်ယောဇင် ရှိရင်တော့ ထောင်ထဲမှာ အဆင်ပြေပြေနေရအောင် လိုက်ပေးလိုက်ပေါ့……. ဒါဘဲ…
ဒီအမှုကို လွတ်တော် တယား ဦး ပဓေ ဆိုးမိုးရေး ငှက်ကဌ ဂျီးဒေါ် စု ကိုင်ရင်တော့ ကြေးမုံဂျီး ဂွင်းလုံးကျွတ် နိုင်တယ်။ ဟဲဟဲ ( လုံချည်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်–) ဂျီးဒေါ်စုကြီးက ဂျပန်မှာ ပြောတွားတဲ ့မိန် ့ခွန်း ကြည့်ပါလား။ သူတော်ဂေါင်း မ စကားဆိုတော့ မပစ်ပယ်ကောင်းဝူး–။ ဥူးကြောင်ဂျီးလည်း ကြေးမုံဂျီးနဲ ့အဆင်ပြေပြေ မနေတတ်တာ အလွန် ဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းကြောင်း ဂျီးဒေါ်ကြီးက ပြောခိုင်းလိုက်ဘာဒယ်————။ ဖယောင်း ဖယောင်း— အဲမှားလို့ဘုရား ဘုရား– ( ဂျီးဒေါ်ကြီးစကား အံ့လွန်းလို့လူတောင်ယောင်တယ်) ကဲပါလေ– တစ်ရေးပြန်အိပ်လိုက်ဦးမယ်— ။ ခေါ——–ခေါ———– ခေါ——————
အတော်လေးလဲ ပင်ပန်း နွမ်းနယ် နေဦးမယ်
တိုင်းရေးပြည်ရေး အတွက် မျိုးချစ်စိတ်နဲ့ လုပ်တာဆိုတော့လဲ ဒါလောက်တော့ ပင်ပန်းမပေါ့
ဒါနဲ့ အဲ့ဒီ စစ်ဥပဒေချုပ်နဲ့ စစ်ဖက်လက်ထောက် တွေကိုတော့
ကျုပ် တာဝတိံသာမှာ ခန့်ထားရင် ကောင်းမလားလို့
ပထမ ပိုင်းကို ဖတ်ထားလို့
ဒုတိယ ပိုင်းကိုလည်း လာရောက်အားပေးသွားပါတယ်……………
ဒါနဲ့ တရားခွင်မှာ ရှာတာဗိုဘာလေးတော့ ခေါ်လာဘူးလား…..
ဒီဆိုက်ကဘာဆိုက်လဲ လိုက်လို့ကို မ မှီတော့ဘူး အဓိပါယ်ရှိတာတွေရေးကြပါ။
စာရေးဆရာ အကြည်တော်ကို အားကျလို့လား။အရေးအသားတွေတူနေသလားလို့ ပေါက်ကရတွေဆိုရင် ပြိုင်ရေးကြမယ်လေ သို့သော်အလုပ်ကမအား
မင်းကော ဘယ်လောက်ရေးတတ်လို ့လဲ
စာရေးရတာ လွယ်တယ် မှတ်နေလား
လွယ်တယ် ဆိုခဲ့ရင်တောင် ၊ အခုလို ဟာသ စတိုင်ယား မျိုး က ပိုခက်သေးတယ်
ကြပ်မပြည့်ရင် မန်းဂေဇက် ကို မလာခဲ့နဲ ့
မင်း ပို ဂေါက်သွားမယ်
အစ် အစ် အစ်